Ndụ Live Roulette LiveRoulette Blog - cheapinternetsecuritysoftware.com
1. Ndepụta Okwu nke Roulette
2. Ndụ Roulette FAQ
Ntughari Okwu Roulette zuru ezu
American Roulette: roulettedị roulette nke nwere efu abụọ (00). Abụọ efu ahụ na-anọdụ n’akụkụ otu efu na bọọdụ ịkụ nzọ. Nke a pụtara na e nwere nọmba 38 na egwuregwu ma tinye ọnụ ụlọ na 5.26%.
Azụ azụ: Akụkụ mpụta nke wiilị roulette ebe bọọlụ na-agba.
Ọnụ Ọgụghị Echiche: Akụkụ nke nọmba ndị a na – ekwu na ọ ga – akụ ọtụtụ oge karịa ka enwere ike ịkọ ọnụ ọgụgụ. Enwere ike ịme ọnụọgụ abụọ site na ụkwụ na-enweghị isi ma ọ bụ na-ezighi ezi. Ọ gwụla ma enwere ngwanrọ ngwanrọ, ị nwere ike ịhụ ọnụọgụ abụọ na tebụl roulette n’ịntanetị.
Egwuregwu Egwuregwu: Egwuregwu roulette na-adịghị mma. N’egwuregwu egwuregwu roulette, wiilị nwere ike ime ka ọnụọgụ ọnụọgụ karịa oge ọ bụla karịa n’ihi na ọ naghị agbanwe agbanwe na agbanyeghị.
Betgba ojii: betzọ nzọ na mpụga na ntanetị na ntanetị n’ịntanetị. Mgbe ị na-agba nzọ na nwa, ị ga-emeri 1: 1 (ọbụlagodi ego) laghachi na ego gị ma ọ bụrụ na nọmba ojii ọ bụla dakwasịrị.
Bottom Track: Ihe a gbajiri agbaji nke wheel nke na-adịgide adịgide n’oge ntụgharị. Mgbe bọọlụ jiri nwayọ nwayọ, ọ na-esite na backtrack wee banye n’igwe egwu tupu ọ daba n’akpa ọnụ ọgụgụ.
Carre: Okwu French maka nzọ nkuku.
Cheval: Okwu French maka ịgba nzọ na ala dabere na ntanetị na ntanetị.
Colonne: Okwu French maka kọlụm nzọ na roulette.
Egwuregwu Kọlụm: Dị ka ịkụ nzọ iri na abụọ, ịkụ nzọ kọlụm na-enye gị ohere iji otu mgbawa kpuchie nọmba 12. Enwere ogidi atọ ịhọrọ site na, na nkwụnye ụgwọ na mmeri mmeri bụ 2: 1.
Ngwakọta Ngwakọta: N’izugbe, enwere ike ijikọta otu nzọ ma ọ bụ karịa ibe ga-ekpuchi ọnụọgụ abụọ ma ọ bụ karịa. Otu ihe atụ nke nchikota nzọ bụ iri na abuo, nke na-ekpuchi nọmba 12 n’otu akụkụ nke okpokoro.
Nkuku Bet: Otu nzọ na-ekpuchi nọmba anọ ejikọtara. Iji mee nkuku nkuku, ị ga-etinye mgbawa n’etiti etiti nke nọmba anọ. Nke a pụtara na ị na-ahọpụta nọmba anọ niile na akụkụ anọ. Payoutkwụ ụgwọ maka nzọ nkuku dị na ntanetị ma ọ bụ na ntanetị bụ 8: 1.
Dealer: Onye na-achịkwa egwuregwu, a na-akpọkwa ya croupier. Mgbe ị na-egwu roulette, onye na-ere ahịa ga-anọ ma na-achịkwa egwuregwu ahụ. Mgbe ị na-egwu roulette n’ịntanetị, egwuregwu na-ejikwa random generator (RNG) ga-achịkwa egwuregwu ahụ.
Iri na abuo: Otu nzọ nke kpuchiri nọmba 12 n’otu akụkụ nke okpokoro. E kewara nzọ iri na abụọ ụzọ atọ: 1 (nọmba 1-12), nke abụọ (nọmba 13-24) na nke atọ (ọnụọgụ 25-36). Agunyeghi ovu na uzo iri na abuo. Ọ bụrụ na ọnụọgụ ọ bụla na iri na abuo ị na-akụ, ụgwọ a na-akwụ bụ 2: 1.
Na American Roulette, abụọ zero (00) bụ ọnụ ọgụgụ ọzọ na wiilị.
En Plein: Okwu French maka nzọ kwụ ọtọ na ntanetị na roulette.
Mkpọrọ: Iwu a na-ahụkarị na French Roulette, ụlọ mkpọrọ pụtara n’ụzọ nkịtị “n’ụlọ mkpọrọ”. Iwu a metụtara ọbụlagodi ego ma na-enye gị ohere iweghachite ọkara oke osisi gị mgbe efu kụrụ ma ọ bụ hapụ ya “mkpọrọ” maka ntụgharị ọzọ. You’re na-ahọrọ ma i nweta nkwụghachi 50% na nzọ efu ma ọ bụ debe osisi gị maka nzọ ọzọ.
European Roulette: roulettedị kachasị dị n’ịntanetị na ndụ roulette na ọtụtụ casinos. Egwuregwu a bụ nwanne nwanne okenye nke American Roulette. Isi ihe dị iche n’etiti abụọ dị iche iche bụ na European Roulette anaghị egosipụta efu abụọ. N’ihi nke a, o nwere ọnụọgụ pere mpe na egwu ya na ibe ya America. Na mkpokọta, enwere ọnụọgụ 37 na European Roulette, yana ụgwọ kachasị nke 35: 1. Ọnụ ụlọ bụ 2.70%.
Ọbụna Ego: Okwu a na-ezo aka ịkwụ ụgwọ 1: 1. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ị ga-enweta otu ego ahụ i tinyere. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ n ’ị € € 1 wee merie, nloghachi gị niile ga-abụ stake 1 osisi gị azụ + € 1 uru.
Nọmba Ise: Nke a bụ otu nzọ na-enye gị ohere ikpuchi ọnụọgụ ise doro anya: 00, 0, 1, 2 na 3. Ọ bụrụ na ị merie nzọ a, nloghachi gị ga-abụ 6: 1.
Elu Elu: Nke a bụ nzọ dị n’èzí na ntanetị na ntanetị n’ịntanetị. Mgbe ị na-nzọ ke “elu”, ị ga-ekpuchi niile nọmba n’etiti 19-36. Ọ bụrụ na ị merie, nloghachi ahụ bụ 1: 1 (ọbụlagodi ego).
Ulo Ulo: Okwu a na-ezo aka na uru ụlọ (cha cha) nwere n’ọnọdụ ọ bụla. Ọnụ ọnụ ụlọ na roulette na-emepụta site na ọdịiche nke nsogbu ọ bụla nzọ mmeri na ịkwụ ụgwọ ị nwetara. Dịka ọmụmaatụ, ịkwụ ụgwọ maka nzọ kwụ ọtọ bụ 35: 1. Agbanyeghị, na European Roulette, enwere ọnụọgụ 37 na tebụl. Nke a (37: 1 na 35: 1) bụ ebe cha cha na-enweta uru ya.
N’ime Bet: betzọ nzọ ọ bụla e mere n’ime akụkụ nke tebụl a maara dị ka nzọ n’ime. N’ime nzo nwere ike ịbụ ogologo ma ọ bụ nchikota nkewa.
La Partage: Mgbe ị na-egwu French roulette na ntanetị ma ọ bụ na-adị ndụ, La Partage bụ iwu pụrụ iche nke na-enye gị ohere ịnweta 50% nke osisi gị azụ na nkwụnye ego. Mgbe ọ metụtara, ọ bụrụ na ị na-eme ego ọbụla na bọọlụ daa na efu, ị ga-enweta ọkara nke ego gị azụ. Nke a yikwara ka risonlọ Mkpọrọ En. Agbanyeghị, ịnweghị nhọrọ ịhapụ nzọ gị na njem ọzọ na La Partage.
Line Line: A makwaara dị ka nzọ ụkwụ isii, nhọrọ a na-enye gị ohere iji kpuchie nọmba isii (ahịrị abụọ nke atọ) na otu nzọ. Iji mee nzọ a, ị kewara ahịrị abụọ na otu mgbawa. A ga-etinye mgbawa ahụ na njedebe njedebe nke ahịrị. Payoutkwụ ụgwọ na nzọ a bụ 5: 1.
Akara: Na roulette ndụ, akara, nke a na-akpọ ‘dolly’, bụ obere mmejuputa iwu iji akara akara mmeri. Mgbe okirikiri ahụ gafere, onye na-ere ahịa ahụ ga-etinye akara na nọmba mmeri ahụ wee kpochapụ ihe niile ị ga-efu na tebụl roulette tupu ịkwụ ndị mmeri ahụ ụgwọ.
Ndị agbata obi: Na roulette, ndị agbata obi bụ nọmba achọtara n’akụkụ / n’akụkụ ibe ha na wiilị ahụ. Ihe ndị a metụtara ụfọdụ ụdị ịkụ nzọ, dị ka Orphelins.
Phanmụaka na-enweghị nne: typedị nzọ nke na-enye gị ohere iji ọnụ ahịa ego kpuchie nọmba 6, 34 na 17.
Orphelins: Okwu French nke na-ezo aka n’usoro ịkụ nzọ na ndị agbata obi (ọnụọgụ ndị nọdebere ibe ha na wiil). Site na ịkụ nzọ na nọmba “agbata obi” (ya bụ orphelins), ọ na-enye gị ohere ikpuchi otu ọnụọgụ nke ọnụọgụ ole na ole.
N’aka etszọ: nzọ ọ bụla n’èzí nke tebụl dị n’ime. Nzọ nzọ ndị dị n’èzí na-enye nloghachi dị ala karịa n’ime nzọ. Na roulette, bọọdụ dị n’ime bụ nhọrọ ịkụ nzọ ọ bụla nwere na-enweghị isi, ebe ịkụ nzọ akụkụ anọ. Mbadamba ime bụ ebe ọnụọgụgụ ọnụọgụ.
Ego: Ndị a bụ oghere ebe bọl na-agbada na wiilị roulette.
Random Number Generator (RNG): Mgbe ị na-egwu roulette n’ịntanetị, ihe ga-esi na ya pụta bụ ihe omume kọmputa a maara dị ka RNG. Otu RNG na-eji mgbakọ na mwepụ iji wepụta nsonaazụ enweghị usoro. Nke a na-enye ohere ka ndị na-ahụ maka ịntanetị na-enye egwuregwu dị ka ndị ogbo ha dị ndụ.
Bet Red: Nzọ nzọ dị na mpụga na ntanetị na ntanetị. Mgbe ị na-acha uhie uhie, ị ga – emeri 1: 1 (ọbụlagodi ego) laghachi na ego gị ma ọ bụrụ na nọmba uhie ọ bụla dakwasịrị.
Sixainne: Okwu French maka akara akara.
Gbasaa: Azọ nzọ nke na-ekpuchi ọnụọgụ abụọ dị n’akụkụ ya. A maara nzọ ahụ dị ka nkewa n’ihi na ị na-ekewa mgbawa n’ụzọ nkịtị site na ịtụkwasị ya n’ahịrị n’etiti nọmba abụọ ahụ. Ego ịkwụ ụgwọ maka ịgba nzọ kewara na roulette bụ 17: 1.
Nnennen Up: A na-enweta nzọ na otu nọmba dị ka ịgbatị. Payoutgwọ ịkwụ ụgwọ na-emeri nkwụnye ego na roulette bụ 35: 1.
N’okporo ámá: Yiri nzọ nzọ, akara nzọ n’okporo ámá na-enye gị ohere iji ọnụọgụ abụọ kpuchie nọmba atọ n’usoro. Iji mee nzọ nzọ n’okporo ámá, ịkwesịrị itinye mgbawa na njedebe njedebe nke ahịrị. Payoutgwọ maka nzọ nzọ n’okporo ámá na-emeri na roulette bụ 11: 1.
Tiers Du Cylindre: Ndị agbata obi ọzọ nzọ na French Roulette, tiers du cylindre na-ekpuchi ụzọ n’ụzọ atọ nke wiil ahụ. Betlọ nzọ a chọrọ ka ị kpuchie nọmba 12 na ịkụ nzọ. Iji mee ya, ị kewara ụzọ abụọ: 5-8, 10-11, 13-16, 23-24, 27-30, na 33-36. Payoutgwọ ịkwụ ụgwọ na nzọ a bụ 17: 1, dịka mmeri ọ bụla ga-abụ nzọ nzọ.
Transversale: Okwu French maka nzọ n’okporo ámá.
Trio Bet: Okwu ọzọ maka nzọ n’okporo ámá na ntanetị na ntanetị n’ịntanetị.
Voisins du Zero: Ndị agbata obi gị nzọ na nke ahụ ewu ewu na French Roulette. Voisins du efu sụgharịrị dị ka “agbata obi nke efu” na-ahụ na ị na-ekpuchi 17 nọmba na flank efu na wheel. Ikwesiri ikpuchi onu ogugu iri na asaa na uzo itolu. Do na-eme nke a n’ụzọ ndị a:
Mpekere abụọ na 0-2-3 trioOne mgbawa na 4-7 nkewa Otu mgbawa na 12-15 nkewa Otu mgbawa na 18-2 split Otu mgbawa na 19-22 nkewa na 32-35 kewaa
Efu: Ọnụ ọgụgụ dị na egwuregwu nke roulette. Efu dịtụ iche na nọmba roulette ndị ọzọ n’ihi na ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nke a pụtara na ọ na-ewepu ihe ọ bụla n’èzí ịkụ nzọ.
Olee otu egwuregwu cha cha dị ndụ si arụ ọrụ?
Mgbe ị na-egwu egwuregwu roulette ma ọ bụ egwuregwu ọ bụla ọzọ, ị na-ejikọ ya na egwuregwu dị ndụ site na kamera weebụ. Nke a ga – enyere gị aka ịhụ ihe na – eme na tebụl n’oge. Na ntanetị na iyi ahụ dị ndụ, ihe mmetụta RFID na tebụl jikọtara na mmemme kọmputa nke na-enye gị ohere itinye nzo na ihe site na desktọọpụ gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka gị.
Gịnị Bụ RFID Sensọ?
Ndị a bụ obere ngwaọrụ na-edekọ data na ezigbo oge. Ihe mmetụta ọ bụla na-edekọ omume ndị na-eme na tebụl. A na-eziga omume ndị a na mmemme kọmputa ka sistemụ anyị wee mata nsonazụ ọ bụla. Ejiri ozi a tụnyere nzọ ị mere iji chọpụta ma ị meriri gburugburu ma ọ bụ.
Egwuregwu Egwuregwu cha cha Live na Live Roulette
Eeh. A na-achịkwa ma na-achịkwa roulette ndụ na egwuregwu egwuregwu cha cha niile. N’ezie, egwuregwu ọ bụla ịgba chaa chaa ị na-egwu n’ịntanetị ga-adị mma dị ka otu na cha cha-brick-na-mortar cha cha. Iji hụ na izi ezi na nchekwa na oge niile, a na-anwale ma nyochaa egwuregwu egwuregwu roulette. Ọnọdụ ndị a bụ akụkụ nke ọrụ ikikere nke ụlọ ọrụ. Yabụ, na-enweghị egosi na egwuregwu dị mma ma dịkwa mma, ụlọ ọrụ agaghị enweta ikikere ịgba egwu yana, ya mere, agaghị enwe ike ịnye ngwaahịa na ntanetị.
Enwere RNG Na Live Roulette Games?
Mba – ewepu sọsọ ịbụ Lightning Roulette. N’egwuregwu a, usoro ihe omume kọmputa a na-akpọ RNG na-achịkwa ọnọdụ ọnụọgụgụ ise nke àmụmà gbara. Nke a dị nnọọ ka usoro n’azụ egwuregwu cha cha dijitalụ dị ka oghere ntanetị, blackjack na roulette, na-achịkwa Random Number Generator nke egwuregwu ahụ. N’oge a, mmemme ahụ na-arụ ọrụ nke onye na-ere ahịa wee rụpụta nsonaazụ. Na ndụ roulette, ọ bụ ezie – mmanya Lightning Roulette, onye na-ere ahịa bụ naanị ọrụ maka ịchịkwa wiil ahụ na, ya mere, na-eweta nsonaazụ enweghị isi.
Olee Otú M Pụrụ Isi hụ Ihe Ndị A Na-eme?
A na-agbasa egwuregwu niile ịgba chaa chaa na ntanetị na ntanetị gị site na kamera web HD. Iji hụ na onye ọ bụla nwere ahụmịhe kachasị mma, ịnwere ike ịhazigharị ogo iyi ahụ iji kwekọọ na njikọ gị. Na mgbakwunye, ọtụtụ egwuregwu egwuregwu kacha mma dị ugbu a nwere ọtụtụ kamera ka ị nwee ike nweta echiche dị iche iche na bọọdụ na wiilị.
Kedu Ofdị Live Roulette E Nwere?
Nakwa ndị European, American na French roulette, ndị mmepe cha cha na-ebi ndụ mepụta ụdị dị iche iche n’afọ ndị na-adịbeghị anya. Egwuregwu dị ka nhọrọ Lightning Roulette na-enye gị ohere ịwelite nkwalite ụgwọ. Dika egwuru-egwu nke egwuregwu cha cha na-etolite, ị ga-ahụ ihe onyinye ọhụụ na LiveRoulettein n’afọ ndị na-abịanụ.
Iji kpọọ ndụ roulette ma nwee ọ ofụ nke mmemme miri emi n’ịntanetị n’ezie, pịa njikọ dị n’okpuru wee sonyere LiveRoulette taa.
Tags:Blog Live LiveRoulette ndu Roulette
Etu esi egwu egwuregwu cha cha na iPad gị
Egwuregwu mkpanaka eji adịla oge, na-etolite site na ntụrụndụ dị …
Choo mkpọsa cha cha kachasị ọhụrụ maka izu a ebe …
Ekonomi global sangat terpukul oleh pandemi COVID 19 dan sulit …